संक्रमणमुक्त भएकाले यी पाँच प्रकारका खाना खानु हानिकारक – Khabar 27 Media
संक्रमणमुक्त भएकाले यी पाँच प्रकारका खाना खानु हानिकारक
June 7, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on संक्रमणमुक्त भएकाले यी पाँच प्रकारका खाना खानु हानिकारक
एजेन्सी । महामारीका रुपमा फैलिएको संक्रमण अहिले केही कम हुने क्रममा छ । संक्रमित हुने भन्दा मुक्त हुनेको संख्या बढ्दो छ । तर संक्रमण मुक्त भएपछि पनि केही ब्यक्तिहरुमा नयाँ समस्या समेत देखिएका छन् । कतिपयले महामारी जितेको अवस्थामा पनि ज्यान गुमाएका उदाहरण छन् । नेपाल र भारत लगायतका मुलुकमा संक्रमण कम हुने क्रममा भएपनि ब्ल्याक फंगसका विरामी बढ्दो देखिएका छन् । जसवाट बच्न चिकित्सकहरुले केही सुझाव दिएका छन् ।
केही पोस्ट को भिडको समस्याको सामना पनि गर्नु परेको छ भने केहीले ब्ल्याक फंगसको । यसवाट बच्न यस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ । यस्तो समस्या भोग्नेहरु कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, मधुमेह र स्टोरयडको प्रयोग यसको मुख्य कारण भएको विशेषज्ञहरु बताउँछन् । यदि समयमा नै उपचार गरियो भने बिरामीको ज्यान बचाउन सकिन्छ ।
यी रोगको मारबाट बच्ने हो भने मानिसले केही सावधानीहरु अपनाउनुको साथै खानपानमा पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’
संक्रमण ठिक भएका मानिसले यस्ता खानेकुराबाट बच्नु आवश्यक छ
चिसा खानेकुरा : यदि कोरोनामुक्त भएर पनि ब्ल्याक फंगसको शिकार हुनु भएको छ भने चिसा खानुकुरा बिर्सिएर पनि खानु हुँदैन । चिसो पानी पनि पिउनु हुँदैन । चिसा फलफूल मात्र नभएर फ्रिजबाट निकालिएका कुनै पनि खानेकुरा खानु हुँदैन । यी खानेकुराहरुले समस्या झन् धेरै बढाउँछ ।
तारेको–भुटेको : त्यसो त तारेको र भुटेको खानेकुरा सबैका लागि अस्वस्थ्यकर हुन्छ तर विशेष गरेर कोरोना ठीक भएका मानिसहरुले तारेको भुटेको खानेकुरा खानबाट बच्नु पर्छ । पकौडा, समोसा, सेल, पुरी खानबाट बच्नु पर्छ । यसले पनि समस्यालाई घटाउनु भन्दा बढाउँछ ।
फलफूल: फलफूल स्वास्थका लागि लाभदायक हुन्छ तर फलफूल खाँदा विशेष कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । कुनै पनि फलफूल खानु अगाडि त्यसलाई तातो पानीमा राम्रोसंग धुनु आवश्यक छ । राम्रोसंग धोइएन भने ब्ल्याक फंगसको खतरा बढ्न सक्छ ।
बासी अथव पकाएको लामो समयपछिको खाना : कोरोनामुक्त भएका विरामीलाई ताजा खाना खाने सल्लाह दिइन्छ, तर कहिलेकाहिँ पाकेको लामो समयसम्म राखेको खानेकुरा पनि खान्छन्, यस्तो गर्नु हुँदैन । बासी खानेकुरा खानु हुँदैन । यसको साथै काँचो खानेकुरा पनि खानु हुँदैन । त्यस्तै बाहिरको खाना पनि खानु हुँदैन । तपाईंको स्वास्थका लागि उपयुक्त हुँदैन ।
कस्तो अचम्म ! मानिसले झै चाराले ठाडो घाँटी पारेर कुल्ला गरेको भिडियो भाइरल
मेरी आमाले रुँदै भनिन् : मैले बुहारीको औँठी चोरेको छैन छोरा … २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला !
निमोनियाको यस्ताे लक्षण देखिए तुरुन्त डाक्टरको सम्पर्कमा जानुहाेस् नत्र आइपर्न सक्छ ठूलाे समस्या
May 19, 2021 Shyam Lama
चिया सेतो पिउने कि कालो ? यस्ता छन् मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रेग्मीका केही सुझाव
January 16, 2021 July 14, 2021 Shyam Lama
खाली पेटमा खाँदै नखानुहोस् यी ७ खाने कुरा, जसले मानिसलाई दिर्घ रोगी बनाउँछ
October 17, 2021 Shyam Lama